अनुहारलाई बेदाग,चम्किलो बनाउन यसरी प्रयोग गर्नुहोस् अण्डाको फेसप्याक ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
अण्डा हाम्रो शरीरका लागि मात्रै नभई हाम्रो छाला र कपालका लागि पनि निकै फाइदाजनक हुन्छ ।अण्डाको सेतो भागलाई ब्यूटी ट्रिटमेन्टको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । अण्डाको सेतो भाग मिनरल्स, भिटामिन र प्रोटिनले भरपुर हुन्छ र छालालाई बेदाग बनाएर सुन्दरता बढाउने काम गर्छ ।
अण्डाको सेतो भागले कसरी फाइदा पुर्याउँछ र यसको फेस प्याक कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर जानकारी दिँदै छौं ।
बेदाग छालाका लागि फेस प्याक-
अनुहारको दाग धब्बा हटाउनका लागि एक चम्चा अण्डाको सेतो भागमा एक चम्चा चिनी र एक चम्चा कर्न स्टार्च मिसाउनुहोस् । यसले तपाईको अनुहारबाट ब्ल्याकहेड्स हटाउनुका साथै दाग धब्बा पनि टाढा राख्छ । यदि तपाईंमा छाला चिल्लो छ भने यसमा एक चम्चा कागतीको रस र मह पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ । यसले अनुहारको फोहोर हटाउँछ र अनुहार सफा देखिन्छ ।
एन्टि एजिङ फेस प्याक –
अण्डाको सेता भागको प्रयोग एन्टी एजिङ ट्रिटमेन्टको रुपमा पनि गर्न सकिन्छ । यसका लागि अण्डाको सेतो भाग लिनुहोस् । पहिलो कोट छालामा लगाइसकेपछि माथिबाट टिस्यू पेपर टाँस्नुहोस् र पुनः अण्डाको दोस्रो कोट लगाउनुहोस् । यो कक्रक्क भएपछि सफा पानीले धुनुहोस् । यसले छाला कसिलो बनाउनुका साथै चाउरी पनि हटाउँछ ।एजेन्सी
प्रकाशित मिति: Nov 12, 2021
छाला र कपाल राम्रो बनाउनका लागि यसरी प्रयोग गर्नुहोस् गुलाब जल !
गुलाब जल सुन्दरता बढाउनका लागि प्रयोग गर्ने गरीन्छ । धेरैजसो महिलाहरु आफ्नो छालाको स्याहार गर्नको
आगामी भदौमा ‘मिस एण्ड मिसेस युनिभर्सल २०७८’ हुने
सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘मिस एण्ड मिसेस युनिभर्सल २०७८’ भदौमा हुने भएको छ । स्पार्कल इन्टरटेनमेन्टको आयोजनामा
अनुहारलाई बेदाग,चम्किलो र मुलायम बनाउन यसरी प्रयोग गर्नुहोस् अण्डाको फेसप्याक !
छालाको सुरक्षाको लागि जाडोमा नरिवलको तेललाई यी ७ तरिकामा प्रयोग गर्नुहोस्
अहिलेको मौसम भनेको चिसो हुने बेला हो । काठमाडौं देखि देशभरीनै चिसो बढेको छ ।
सौन्दर्य क्षेत्रको अग्रणी व्यापारिक प्रतिष्ठान फेसियल हाउसको १३ औं वार्षिक उत्सव भब्यताको साथ सम्पन्न भएको